Shiinaha gudbiye Heerkulka iyo Soo saaraha Xakamaynta - Soo-gudbiyaha Heerkulka Tayada iyo Hadalka Xakamaynta - Testeck Co., Ltd
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka dareeraha > Gudbiye heerkulka iyo maamusha
Qalab kululeeyaha oo aan caddeyn karin
Waxyaabaha la isku haleyn karo Iyada oo shucaaca uu shaqeynayo qalabka digniinta cilad-darrada.
Bandhig dijitaal ah RTD
sheygan ayaa ah mid lagu kala habeyn karo dareeraha gudbiyaha heerkulka caqliga leh, kaas oo qaata 2, 3, iyo 4 silig Pt100 ka-hortagga kuleylka, xariijinta calaamadda aqbalida, iyo wax soo saarka 4-20mA heerka calaamadaha. Iyada oo shucaaca uu shaqeynayo qalabka digniinta cilad-darrada.
si toos ah otomaatiga xakamaynta heerkulka
Taxanaha 'D taxanaha muujinta caqliga' waa nooc cusub oo qalab ah oo si madax banaan loo baaray lana soo saaray iyadoo la soo bandhigayo tikniyoolajiyad ajnabi oo horumarsan isla markaana looga dan leeyahay gaar ahaanta warshadaha biyaha dhaliya.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Gudbiye heerkulka iyo maamusha soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Gudbiye heerkulka iyo maamusha kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.